जव लालबाबु आकस्मिक मालपोत कार्यालयमा पुग्दा यस्तो देखेपछि ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > जव लालबाबु आकस्मिक मालपोत कार्यालयमा पुग्दा यस्तो देखेपछि !
काठमाडौं, ९ वैशाख । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन्। अकस्मात कार्यालय पुगेका लालबाबुले कार्यालयको काम सन्तोषजनक नभएको बताए । उनले त्यहां सेवाग्राही र केही कर्मचारीको कुरा सुने पछि यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन् ।३० जना कर्मचारी रहेको कार्यालयमा उनी त्यहां पुग्दा सम्म ९ जना
अनुपस्थित थिए भने २ जना कार्यालय समय भन्दा निकै ढिलो कार्यालय पुगेका थिए । ९ जना कर्मचारी लामो समय देखि कार्यालयमा नआएको पाइएको थियो ।मन्त्री पण्डितले कार्यालयका कायम मुकायम प्रमुख केशवप्रसाद न्यौपानेलाई कार्यालयको कार्यशैली सुधार्न निर्देशन दिए ।
उनले कार्यालयको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले कायम मुकाम प्रमुख न्यौपानेलाई काममा लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक व्यवस्थापन र कारबाहीका लागि सम्बन्‍धित मन्त्रालय र विभागमा पत्रचार गर्न निर्देशन दिए । उनले अनुपस्थित कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएका छन्।
कार्यालयको काम कारवाहीका विषयमा निकै गुनासो आएकाले आफुले छड्के अनुगमन गरेको बताए । मन्त्री पण्डितले जनतालाई ठगेर खाने जो कोही कर्मचारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रचण्डको खतरनाक मास्टरप्लानको पर्दाफास -पूरा हेरेर शेयर गर्नुहोस
यातायातमन्त्री महासेठले गरे फेरी अर्को ठुलो घोषणा , अब के हुन्छ ?
काँग्रेसमा महिला नेतृत्वः पाँचथरकि मैया श्रेष्ठ बनिन् प्रदेश सभा क्षेत्रिय सभापति!